नयाँ आइफोन आयो, पानीमा डुबेपनि नबिग्रिने, के के छन् अरु विशेषता ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, सूचना प्रविधी → नयाँ आइफोन आयो, पानीमा डुबेपनि नबिग्रिने, के के छन् अरु विशेषता ?
नयाँ आइफोन आयो, पानीमा डुबेपनि नबिग्रिने, के के छन् अरु विशेषता ?
September 8, 2016५२० पटक
भदौ २३ – एप्पलले आइफोनको नयाँ संस्करण सर्वाजनिक गरेको । अमेरिकाको सन फ्रान्सेसकोमा बुधबार राति भएको विशेष कार्यक्रममा एप्पलले आइफोन सेभेन र आइफोन सेभेन प्लस सार्वजनिक गरेको हो । एप्पल वाच टु पनि सार्वजनिक भएको छ ।
आइफोन सेभेनका मुख्य विशेषता
आइफोन सेभेन प्लसमा दुई वटा १२ मेगापिक्सलको क्यामरा छ । एउटामा वाइड एंगल लेन्स छ भने अर्कोमा टेलिफोटो लेन्स छ । दुई वटा क्यामराको सहायताले आइफोन सेभेन प्लसले दुई गुणासम्म अप्टिकल तथा १० गुणासम्म डिजितल जुम गर्न सक्छ । यसबाट प्रयोगकर्ताले डिएसएलआर क्यामराले खिचेको जस्तै तस्बिर खिच्न सक्छन् । यसमा थ्रिडी म्यापिङको सुविधा पनि हुनेछ ।
नयाँ आफफोनमा पानी तथा धुलोबाट सुरक्षित हुने सुविधा छ । यी आइफोन आइपी सिक्सटी सेभेन वाटर एण्ड डस्त रेसिस्ट्न्ट छ । यसको अर्थ तीन दशमलव दुई फिट गहिराइ भएको पानीमा ३० मिनेटसम्म नयाँ आइफोन डुबेपनि केही हुने छैन ।
नयाँ आइफोनमा अघिल्ला आइफोनमा जस्तो हेडफोनको ज्यान हुने छैन । यसमामा ३.५ एमएमको आइफोन ज्याक हटाइएको छ । अब तार रहित हेडफोन प्रयोग हुनेछ ।
जसलाई एयरपोडस नाम दिइएको छ । एयरपोड्समा पाँच घण्टाको क्षमता भएको ब्याट्री छ । तर यसमा अहिले भइरहेको हेडफोन लगाउन मिल्ने गरी ३.५ एमएमको हेडफोन एडाप्टर हुनेछ ।
ब्याट्री क्षमता आइफोन सेभेनमा आइफोन सिक्सको भन्दा दुई घण्टा बढी छ । यस्तै आइफोन सेभेन प्लसको ब्याट्री क्षमता आइफोन सिक्स प्लसको भन्दा एक घण्टा बढी छ ।
३२ जिबी, १२८ जिबी र २५६ जिबी स्टोरेज क्षमतामा उपलब्ध
जेट ब्ल्याक, ब्ल्याक, गोल्ड, सिल्भर र रोज गोल्ड कलरमा उपलब्ध
मूल्य ५९९ पाउण्डबाट सुरु